लघुकथा : कलीको प्रभाव | NepalDut
असाेज १० गते २०७७
नाईन्टिन फाउन्टिनमा तक्मे बुढाले फेसबुक एकाउन्ट खोलेपछि आफ्नी अर्धाङ्गिनी फूलमायालाई पनि एकाउन्ट खोलिदियो। पवित्र माया प्रेममा बाँधिएका यी जोडी आफैमा गर्व गर्थे। कहिल्यै एकले अर्काको कुरामा अटेर गर्दैनथे । एक दिन तक्मेबुढाले भन्यो, ‘हौ फूलमाया अनि त हामी दुई जना चट्ट परेको तस्बिर फेसबुकमा राखे कस्तो हुन्छ ?’
भो नराखुम बुढा यस्तो राम्रो हाम्रो माया पिरिम किन पो अरुलाई देखाउनु परो र ?
आईले भने ठीक कुरा गर्‍यौ होई फूलु। तर पनि मुलाई राख्न मन लागेछ हाम्रो फुटो ।
तेस्तो हत्ते त किन गर्नु पर्‍यो ? राख्नी भए राख्नु न त । म के रोकम त नि ।
आईले पनि फेरि ठीक कुरो गर्‍यो यो फूलुले ।
दुई जनाको सुन्दर तस्बिर फेसबुकमा पोष्ट गर्यो तक्मेले । धेरै जनाले तस्बिर मन पराए। तक्मे हस्किएर दिनदिनै यस्तै अझ राम्रा सिनहरुमा गई फोटा खिचेर पोष्ट गर्न थाल्यो । २, ४ महिनापछि उनीहरुको पवित्र प्रेममा जलन भई इर्ष्या र घृणा आई तपस्या गरे।
कली प्रशन्न भएर उनीहरुको माया प्रेम खण्डित गराउन सफल भए भनी वरदान दिईन्। कलीको यस्तो शक्तिशाली वरदानका प्रभावले गर्दा तक्मेका हृदयमा अन्य गोपिनी र फूलमायाका हृदयमा अन्य कृष्णहरु आई बाँसुरी बजाउन थाले।
फूलमाया अचेल कहिले कुन बृन्दावन कहिले कुन बृन्दावनमा नाच्दै ठिक्क छ भने तक्मे बुढाचाहिँ प्रत्येक गोपिनीलाई दिनदिनै एक एक ओटा तक्मा पुरस्कार स्वरुप दिनमै ब्यस्त ।